Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 28)
Ulefone Gemini presale wuxuu bilaabmayaa Febraayo 14
Ulefone Gemini ayaa la iibin doonaa bisha Febraayo 14 iyada oo lagu qiimeeyo $ 119 oo loogu talagalay 6.000 cutub ee ugu horreeya
Samsung waxay kudhowaad labanlaabaysaa bartilmaameedka iibka ee Galaxy S8: 60 milyan oo unug
Samsung ayaa rajeyneysa inay ku dhowaad laba jibbaarto bartilmaameedka sanadkii hore ee Galaxy S7, iyada oo ku dhejineysa 48 milyan oo unug oo loo qaybiyey adduunka.
Samsung India ayaa Daahfurtay Galaxy S8 + Bogga Taageerada
Galaxy S8 wuxuu horey u haystay boggiisa taageerada ee khadka tooska ah ee Samsung India markii la daabacay. Galaxy S8 oo yeelan doonta nooc Mareykan ah.
Galaxay S8 ayaa markale lagu sifeeyay midabbo qalin iyo casaan leh 'Bixby' oo furaha lagu daray
Pink iyo qalin waa labada midab ee ka muuqda sawirka cusub ee xaday Samsung Galaxy S8 ee soo raacaya qaab muuqaal ah oo isku mid ah
LG G6 wuxuu soo bandhigi doonaa tayada codka ee cajiibka ah
LG G6 wuxuu lahaan doonaa nidaam afar-DAC ah oo uu ku soo bandhigi doono cod dhawaq leh oo aad uga sarreeya kan la tartamaya, oo leh maqal hufan oo tayo leh.
Qalabaynta degdega ah ee Android ayaa hadda loo heli karaa qalabka Nexus iyo Pixel
Tethering-ka degdegga ahi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad otomaatig ka dhigto tallaabooyinka gacanta lagu qaado marka la abuurayo barta WiFi. Hadda waxaa laga heli karaa Nexus iyo Pixel.
Xiaomi waxay xaqiijisay inay soosaarayso qalab u gaar ah taleefannada casriga ah
Xiaomi Mi 6 wuxuu noqon karaa terminal-ka ugu horreeya ee sumadda Shiinaha inuu yeesho shirkad gaar u ah shirkadda, Pinecone, oo isku dhafan.
LG G6 ayaa xaqiijiyay inuu isticmaalo Snapdragon 821 chip
Sababtoo ah Samsung waxay leedahay gaar ahaanta 'Snapdragon 835', LG waxay ku jirtay booska isku-darka Snapdragon 821 si loo gaaro MWC 2017.
Xanta ayaa tilmaameysa in Samsung ay magac u sameysay Galaxy Note 8 "Baikal"
Hal xanta ayaa tilmaamaysa in Samsung ay magac u sameysay Galaxy Note 8 'Baikal'. Xusuusin kale oo cusub oo laga dhigo 7.
Dhammaan wixii ku saabsan Huawei P10 ee soo socda iyo P10 Plus
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aan illaa iyo hadda ka ognahay qaabka, astaamaha, softiweerka, moodellada, qiimaha iyo helitaanka soo socda ee Huawei P10
Motorola waxay ku dhawaaqday gabagabadii tartanka Moto Mod
Moto Mod wuxuu yeelan karaa mustaqbalka dhow module uu gebi ahaanba hindisay horumariye ka qaybqaatay tartanka Motorola.
Unugyada ugu horreeya ee 6.000 ee Ulefone Gemini waxay ku kici doonaan 119.99 dollars
Ulefone waxay soo bandhigtay dalab aan laga adkaan karin oo loogu talagalay soo bandhigida Ulefone Gemini: taleefanka ayaa ku kacaya $ 119.99, inkasta oo kaliya cutubyada ugu horeeya 6.000
Sawir dhabarka dambe ee qulqulka Motorola Moto G5 Plus
Motorola Moto G5 Plus ayaa markale ka soo muuqanaya muuqaal sir ah, inkasta oo markan ay tahay dhabarka terminal-ka la jaan qaadaya wixii hore u daatay.
Huawei waxay u dirtaa casuumaad munaasabadda bandhigga Honor V9
Honor V9 waa taleefan casri ah oo cusub oo laga soo bandhigi doono Shiinaha, in kasta oo la filayo inay dhici karto inuu adduunka oo dhan ka dhaco.
Dareere cusub oo 'Sony' ah ayaa sawiro gaabis ah soo qaadaya afar jeer ka dhakhso badan sidii hore
Sony waxay dhameystiraysaa taabashada dareemayaal cusub oo ku faanaya afar jeer xawaaraha moodooyinka hore
Redmi Xusuusin 4X, tani waa heerka dhexe ee leh qiimaha ugu fiican ee lacagta
Xiaomi waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Redmi Note 4X, taleefan cusub oo qayb ka noqonaya heerarka sare-dhexe oo leh qiime aad u culus: $ 120
Ma awoodi doontid inaad bedesho xargaha LG Watch Sport maxaa yeelay way ka buuxaan anteenooyin
LG Watch Sport suunku wuxuu fadhiyaa dhammaan anteenooyinka gudaha ku jira taas oo ka hortageysa beddelkooda kana dhigaya dayactirkooda mid qaali ah
Android Wear 2.0 ayaa beegsaneysa saacadahaan casriga ah toddobaadyada soo socda
Google horeyba waxay u heysay liis dhameystiran dhammaan smartwatches-yada heli doona Android Wear 2.0 toddobaadyo gudahood.
LG wuxuu ku dhawaaqayaa Watch Sport iyo Watch Style oo wata Wear 2.0 oo ah Android
Labadan smartwatches LG Watch Sport iyo Watch Style waxay ciyaari doonaan Android Wear 2.0 waxayna yeelan doonaan kuwa gaar u ah inta ay kuwa kale gaadhayaan.
Bixby, kaaliyaha dalwaddii ee Galaxy S8, wuxuu fahmi karaa 8 luqadood
Hadday sidaas tahay, Samsung waxay lahaan lahayd hanti aad u wanaagsan oo ay kula ciyaarto Bixby, kaaliyeheeda macmiilka ah ee fahmi kara xitaa luuqadda Shiinaha.
Moto Z Play la sii daayay wuxuu bilaabayaa inuu helo Android 7.0 N
Moto Z Play ee bilaashka ah ayaa durbaba qaata qaybtooda Android 7.0 adoo adeegsanaya OTA. Moto Z Play oo ku xiraya wadaha wuxuu qaadan doonaa dhowr bilood oo dheeri ah
Samsung waxay diiwaangelisaa magaca Galaxy J3 Luna Pro
Samsung ayaa diiwaan galisay magaca Galaxy J3 Luna, oo ah taleefan casri ah oo cusub oo la soo bandhigi doono qeybta hore isla markaana ku kali noqon kara Mareykanka
Meizu M5s wuxuu diyaar u ahaan lahaa in loo soo bandhigo usbuuca soo socda mid kale oo ka mid ah taleefannada xiisaha leh ee sumaddan Shiinaha.
ZTE Quartz wuxuu udaadiyey sidii astaanta ugu horeysa ee loo yaqaan "Android Wear smartwatch"
Lama oga haddii nooca Android Wear ee ZTE Quartz, smartwatch-ka ugu horreeya ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay, uu noqon doono 2.0-ka soo socda.
Falanqaynta Samsung Galaxy J5, oo ah nooc soo gal ah oo leh qiimo jaban
Falanqaynta Isbaanishka ee Samsung Galaxy J5 2016, taleefan dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo leh shaashadda AMOLED iyo qaab aluminium ah
Nubia Z11 Mini S ayaa durbaba lagu iibinayaa Spain lacag dhan 349 euro
Nubia Z11 Mini S ta waxaa lagu iibiyaa Spain gudaheeda kaliya 349 euro. Terminal loogu talagalay dadka jecel sawir qaadista ee qiimaha fadeexada.
Sawirkani wuxuu muujinayaa khafiifka hoose ee muraayada Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 wuxuu dib ugu soo laabanayaa hore si uu u muujiyo sawir aad sifiican ugu arki karto sida khafiifka ah ee jibbaaraduhu yihiin.
Soo bandhigid cusub oo kafiican Galaxy S8 iyo S8 Plus
Qaar ka mid ah isdhiibid cusub ama kuu oggolaan maayaan inaad si faahfaahsan u aragtid sida aaladaha cusub ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus noqon doonaan
LG Watch Sport iyo Style buugaagta isticmaalaha ayaa muujinaya Kaaliyaha Google iyo inbadan
Kaaliyaha Google waa mid ka mid ah tiirarka dhexe ee Android Wear 2.0 sida ku cad buugaagta isticmaalaha ee LG Watch Style iyo Sport
Dareemayaasha cusub ee casriga ah ee Sony ee loo yaqaan 'CMOS image image' waxay leeyihiin DRAM u gaar ah
Sony waxay dooneysaa inay ku hormariso tikniyoolajiyadda sawir qaadista qalab cusub oo loo yaqaan 'CMOS sensor' oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee leh xusuusta DRAM
Maalinta Jacaylka ayaa soo socota kuwanuna waa hadiyadaha tiknoolajiyada ugu fiican ee Maalinta Jacaylka. Ma hubo waxa la siinayo? Ha moogaanin fikradahan.
LG Watch Style waxay muujineysaa qaabkeeda
Naqshadda hore ee LG Watch Style, saacad leh wareeg wicitaan wareeg ah, ayaa laqiyaasay oo la soo bandhigi doonaa waqti yar
Samsung waxay rukhsad u siisay nidaam fiiqan oo loogu talagalay qalab jilicsan
Samsung waxay awood u siisay qalab fiiqan qalab jilicsan oo la soo bandhigi karo sanadkan 2017.
Matrix PowerWatch waa smartwatch oo aanad waligaa lacag ka qaadi doonin
Xilligan la joogo waa mashruuc ku yaal Indiegogo oo saameyn weyn ayey ku leedahay sababtaas darteed uma baahna in la raro.
Sawirro cusub oo xaday LG G6, markan laga soo saaray daboolka
Mid ka mid ah daboolka LG G6 wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku dhowaanno waxa calankan soo saaraha Kuuriya uu aragga siinayo.
Xiaomi ee ku dhow Pinecone chip ayaa horay bog ugu leh Weibo
Qalabka Pinecone wuxuu noqon doonaa processor-ka Xiaomi ee u gaarka ah qaar ka mid ah kuwa ugu caansan heerka soo-gelitaanka ay xambaari doonaan.
Daadinta ayaa muujineysa Snapdragon 835 chip iyo 6GB RAM oo loogu talagalay HTC 11
Daadinta cusub ayaa ina hor dhigeysa qaar ka mid ah qeexitaannada muhiimka ah ee HTC 11 oo leh Snapdragon 835 iyo 6 GB oo RAM ah.
Qiimaha iyo astaamaha farsamada ee Huawei P10 iyo Huawei P10 Plus waa la sifeeyey
Astaamaha farsamada, naqshadeynta iyo qiimaha Huawei P10 iyo Huawei P10 Plus, calamadaha xiga ee soo saaraha Aasiya, ayaa la sifeeyey
Faahfaahinta cusub ee Galaxy S8 mahadsanid daboolida rasmiga ah
Faahfaahin dheeraad ah ka sokow, waxay ku dhowaad xaqiijinayaan tuhunnada qaarkood ee ku saabsan qaar ka mid ah astaamaha muuqaalka ee Samsung Galaxy S8 terminal.
Google ee LG Android Wear 8 smartwatches ayaa la bilaabi doonaa Febraayo 2
The Style Watch iyo Watch Sport ee Google iyo LG oo leh Android Wear 2.0 ayaa la soo bandhigi doonaa Febraayo 8, hal maalin ka hor taariikhda loo qorsheeyay.
Sawirro cusub oo ah LG G6 ayaa ka muujinaya dhammaan dhinacyada
Muuqaaladan cusubi waxay durba ina tusayaan LG G6 bilaa sir ah waana buugga ugu wanaagsan ee aan aragnay maanta inta aan sugeyno 26-ka Febraayo.
Xirashadaani waxay u shaqeysaa sida xeedho iyo sida fiilada taleefankaaga
Haddii aad raadineyso fiilo aad mar walba qaadi karto, labadan wearable waa laba soo jeedin oo xiisa leh oo xitaa mobilka lagaa qaadayo kula jira.
HTC waxay soo saartaa fiidiyoow ay taageerayaashu ku dhiibtaan ra'yigooda HTC Ultra
HTC waxay daabacday fiidiyoow ay taageerayaasha astaantu ku tijaabinayaan HTC U Ultra cusub markii ugu horreysay, oo ah sheeko layaableh oo loogu talagalay naqshadeynta iyo waxqabadka
Sawir dhab ah oo ah LG G6 ayaa la sifeeyey isagoo xaqiijinaya dhammaystirka dhalaalaya iyo labada kamaradood
Hadda waxaan haynaa muuqaal dhab ah oo ah LG G6 halka dhabarka lagu muujiyay dhammaadka madow ee dhalaalaya iyo qaabeyntiisa laba-geesoodka ah ee kamaradaha
Nexus sidoo kale waxay heli doontaa Google Assistant oo cusbooneysiin ah
Nexus 5X iyo Nexus 6P ayaa dhawaan heli kara Kaaliyaha Google ee cusbooneysiinta si ay ula socdaan LG G6, Android TV iyo inbadan.
Maamuuskan 6X wuxuu marayaa imtixaan adag oo adkeysi ah
Honor 6X wuxuu dhaafayaa kun iyo hal dhib oo tijaabo adkaysi leh oo muujinaya awooda iyo daciifnimada taleefanka cusub ee Huawei iyo Honor
Daadinta astaamaha LG G6 waxay kordhin kartaa qiimaheeda 50 doolar
Marka loo eego xanta cusub, LG G6 waxay ku kici doontaa 50 Yuuroo si fudud sababo la xiriira qaybaha ka kooban astaanta cusub
LG waxay diiwaan galisaa magacyada 'G6 Compact', 'G6 Lite' iyo inbadan
Kuwani waxay u muuqdaan moodallo cusub oo LG G6 ah oo noqon doona isafgarad iyo qoraal, inkasta oo sidoo kale la tilmaamay inay "saaxiibo" u keeni karaan G5.
MIT waxay muujineysaa barnaamij loogu talagalay smartwatches kaas oo awood u leh inuu ogaado dareenkaaga
Wadahadal algorithm-ka ay hindisay MIT wuxuu awoodaa inuu bixiyo "dhibcaha dareenka". Algorithm loo adeegsan doono dharka la gashado.
Qiimaha Google iyo LG smartwatches oo wata Android Wear 2.0 ayaa la sifeeyey
Qiimaha labada smartwatches ee wata 'Android Wear 2.0' ee LG iyo Google ay si wada jir ah u soo saareen ayaa la daadiyay.
Android 7.1.2 waxay keentaa tilmaamaha dareenka faraha ee Nexus 5X iyo 6P
Android 7.1.2 waa noocii ugu dambeeyay ee OS ee qalabka mobilada kahor intaan Android O lagu dhawaaqin bilaha soo socda.
Telefoonada Nokia waxay had iyo jeer heli doonaan noocii ugu dambeeyay ee Android ee waqtiga rikoorka ah
Nokia waxay dooneysaa in taleefannadeeda Android ay had iyo jeer la jaanqaadaan si ay uga mid noqdaan astaamaha iyo tayada ugu muhiimsan.
Maamuus 8, falanqayn iyo ra'yi
Falanqaynta Sharafta 8, Taleefan wacdaro leh naqshad runtii soo jiidasho leh iyo astaamo ku ammaanaya qaybta sare
Sawirro qarsoodi ah iyo qeexitaannada Xiaomi Redmi Pro 2
Xiaomi Redmi Pro 2 ayaa la soo bandhigayaa oo hadda waa inaan helnaa sawirrada iyo qeexitaannada xaday maanta.
Naqshadeynta iyo cabirka Galaxy S8 iyo S8 Plus waa la sifeeyey
Waxyar kadib markii aan helnay sawirro badan oo dhab ah oo ah Galaxy S8 iyo S8 Plus, hadda waxaan haysannaa naqshadeynta iyo cabirka dhabta ah ee labada terminaal.
Huawei P10 Plus oo leh 5,5 screen Quad HD shaashad, qalabka wax lagu sawiro ee loo yaqaan 'iris scanner' iyo 'flash ring' ayaa la sifeeyey
Waxaan leenahay daadad leh faahfaahinta xanta ah ee Huawei P10 Plus kaas oo isku diyaarinaya imaatinkiisa MWC 2017 dhamaadka bisha.
ZTE wuxuu ku daadiyaa fiidyow muxuu yahay casriga cusub, Blade A610 Plus
3da Febraayo, ZTE Blade A610 Plus ayaa la soo bandhigi doonaa, terminal ka socda soo saaraha Shiinaha oo leh nashqad qurxoon, dareeraha faraha iyo waxyaabo kale oo badan.
AutoVoice-ka Google Home wuxuu keenaa amarro si buuxda loo beddeli karo
Haddii aad leedahay Tasker, AutoVoice iyo Google Home, fursadaha ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn oo leh saddexdaas aces oo si fiican isugu jira.
Qeexida Moto G5 waa xaday
Motorola ayaa dib ugu soo noqotay dacwada Moto G cusub, markan G5 oo u yimid inuu badalo Moto G4 Play oo la yimid qiime ka sareeya intii la filayay.
Noocyada cusub ee xanta ah ee OPPO Find 9
OPPO Find 9 waxay umuuqataa in dhamaadka ay tahay taleefan jira oo la bilaabi karo qeybta hore ee sanadkan 2017.
Bedelka Sony Xperia XA ayaa lagu soo bandhigay fiidiyow cusub
Fiidiyow cusub ayaa muujinaya dhaxalka Sony Xperia XA oo qaadi doona Android 7.0 Nougat iyo kamarad 23 MP ah. Dabcan, ma lahaan doono dareeraha faraha.
BlackBerry-ka cusub wuxuu yeelan doonaa kamarad weyn oo lamid ah tan Google Pixel
Dareeraha 'Sony IMX378' ayaa ku jiri doona kamaradda dambe ee BlackBerry Mercury cusub sida aan maanta ku ognahay daadinta.
Kani wuxuu noqon lahaa LGW-ga soo socda ee casriga ah
Android Wear 2.0 wuxuu noqon doonaa cusbooneysiinta ugu weyn ee madal la gashado iyo LG Watch Style wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah taageerayaasheeda.
Samsung Galaxy A cusub ayaa horey loogu sii iibiyay dalka Spain
Taleefannada casriga ah ee cusub ee Samsung Galaxy A3 iyo Samsung Galaxy A5 ayaa hadda laga heli karaa iyada oo la sii iibinayo ka hor inta aan Spain laga iibin bogga rasmiga ah
Kaaliyaha Google wuxuu ku xasuusan karaa waxyaabo ku yaal Allo, Pixel iyo Home
Waxaan kaliya tijaabin karnaa awooddan si aan wax ugu xasuusano Kaaliyaha Google ee Google Allo, maadaama Pixel ama Home aysan ku sugnayn dalkeenna.
LG G6 wuxuu mar kale ku daadanayaa muuqaal cusub
LG G6 wuxuu umuuqdaa inuu ku guuleysan doono sanadkaan nashqad aad uga duwan LG G5 iyo Kaaliyaha Google oo noqon doona xarunta taleefanka.
Kani waa sawirkii ugu horreeyay ee gadaal ee Galaxy S8
Waxaan haynaa sawirkii ugu horreeyay ee dhab ah ee dhabarka Samsung Galaxy S8, oo ah qalab yeelan doona wax walba oo ah qaab desktop ah oo loo maro dekedda
WTF?! Smart Speaker, sameecad yar oo badhan leh si aad u qaadatid sawirro iska qaadis ah
Falanqaynta iyo dib-u-eegista WTF Smart Speaker, oo ah sheeko-yaqaan 'mini-bluetooth mini' ah oo sidoo kale leh shaqooyin kiciya kamaradda taleefankayaga ama kaniiniga
USPTO waxay xaqiijineysaa in qaabka desktop-ka Galaxy S8 ee "DeX" uu u dhaqmo sida kombuyuutarkaaga
Samsung Dex waxay caddeyn u tahay in Galaxy S8 uu yeelan doono awood uu ku soo saaro qaab desktop marka uu ku xirmayo "Samsung Dex Station"
HTC waxay u badan tahay inay soo saarto shirkad caan ah 2017 oo leh Snapdragon 835
HTC ma rabto in laga tago ciyaarta Samsung, waxayna diyaar u tahay inay sugto jabinta Snapdragon 835 ee HTC 11
Huawei waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa Huawei P8 Lite 2017
Huawei ayaa hadda soo bandhigtay Huawei P8 Lite 2017, oo ah nooc cusub oo taleefankiisa ugu iibinta badan kaas oo suuqa ku dhuftay warar aad u xiiso badan.
Huawei Watch 2 ayaa imaan doonta bisha soo socota iyada oo gacan laga siinayo shabakadaha mobilada
Huawei Watch 2 wuxuu noqon doonaa saacadda soo socota ee soo saaraha Shiinaha ee leh Android Wear 2.0 oo imaan doonta bisha soo socota iyada oo wicitaanno cod madaxbanaan.
The Guardian wuxuu sifeeyaa faahfaahinta Galaxy S8: shaashadda bilaa biraha, dareeraha faraha gadaal iyo qaabka desktop-ka
The Guardian waa wargeys Ingriis ah oo maanta soo saaray ku dhowaad dhammaan macluumaadka ku saabsan Galaxy S8 cusub ee imaan doona 21-ka Abriil.
Nokia 'Wadnaha' wuxuu ka muuqdaa shaashad 5,2-inji ah, Snapdragon 430 iyo kamarad 13 MP ah
Nokia Heart wuxuu noqon karaa mid ka mid ah lixda aaladood ee mobilada ee Nokia ay ku soo bandhigi doonto sanadka oo dhan gacanta HMD Global.
Xiaomi horeyba waxay u heysataa rikoor kale oo cajiib ah hoosta suunka, iyadoo ku iibisay 250.000 oo unug oo ka mid ah Redmi Note 4s 10 daqiiqo gudahood Hindiya.
Aad iyo aad iyo aad u badan oo isticmaalayaasha geesta ah ee Galaxy S7 ayaa ka cabanaya khadka toosan ee casaanka ah
Samsung's Galaxy S7 gees wuxuu ka cabanayaa khad casaan ah oo toosan oo ka muuqda shaashadda, qaar ka mid ah dadka muddada dheer isticmaala ayaa sheegtay.
Sawiradani waxay muujinayaan awoodda kamaradda Ulefone Gemini
Ulefone waxay daabacday sawirro taxane ah oo muujinaya kartida kamaradda Ulefone Gemini, taleefanka cusub ee shirkadda.
Samsung waxay heshiis la saxiixatay Iming si loo dejiyo fiidiyowga jira ee Mate 9
Mate 9, noocyadeeda kala duwan ee raaxada ah, waxay leedahay xasilinta fiidiyowga ee Imint, oo ah shirkad heshiis la gashay Samsung.
Dakhliga Samsung wuxuu kordhay rubucii afaraad ee 2016, oo ay kujirto dib uxasuusashada Note 7
Rubucii afaraad ee ugu dambeeyay sanadka, Samsung waxay heshay koror faa'iido ah inay noqoto rubuca ugu wanaagsan ee 2017, kuleylka dhibaatada Note 7.
LG G6 wuxuu sameyn doonaa kulankiisii ​​ugu horreeyay dhammaadka Febraayo, laakiin aan lahayn qashin Snapdragon 835
LG G6 wuxuu ku saleysnaan karaa Snapdragon 821 chip iyadoo la siinayo Snapdragon 835, oo u muuqata mid gaar u ah Galaxy S8.
LG Watch Sport iyo Watch Style oo wata Wear 2.0 ayaa ka muuqda sawirrada saxaafadda
Sawirada LG Watch Sport iyo LG Watch Style ayaa soo ifbaxay si ay u muujiyaan nashqadda labadan wearasho leh ee loo yaqaan 'Android Wear 2.0'.
Samsung waxay xaqiijineysaa inuu jiri doono Galaxy Note 8 sanadkan
Haa, waxaan haysan doonaa Galaxy Note 8 sidaa darteed taageerayaashaas daacadda u ah Note 4 iyo Xusuusin 5 waxay u cusbooneysiin karaan nooc cusub oo taxanahan ah oo la xoojiyay.
LG G6 wuxuu yeelan doonaa Google Assistant oo ah xiddigga ugu weyn ee softiweerka
LG G6 wuxuu ku lahaan karaa aalad aad u wanaagsan barnaamijka barnaamijka iyadoo uu leeyahay kaaliyaha Google bilowga. Dhamaan wanaag weyn oo isaga ammaana.
HTC Vive loo xiran karo jir dhiska wuxuu dhex maraa FCC
Waa wax dahsoon waxa qalabkan la xidhan karo ee ka soo gudbay FCC isla markaana leh astaanta HTC Vive kor u qaadaya qof kasta oo la yaaban.
Ku sii wadista falanqayntayada saldhigyada Aasiya ee hooseeya iyo kuwa dhexe, markan waa markiisii ​​Oukitel ...
ZTE Blade A520 wuxuu ku dhowaad ka bilaabmi doonaa suuqa isagoo og inuu soo maray shahaadada WiFi iyo inuu horey u lahaa bog taageero ah.
Soosaarayaasha cusub ee Galaxy S8 waxay soo celinayaan qalabka codka iyo badhanka Bixby
Iyadoo Samsung Galaxy S8, haddii jawaabahan ay run yihiin, waxaad sii wadi kartaa inaad adeegsato dhagahaaga madaxa adigoon adabtarad lahayn ama aad ubaahantahay inaad xoogaa iibsato
Hugo Barra wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tagayo booskiisa madaxweyne ku xigeenka Xiaomi
In kasta oo uu sii ahaan doono lataliye, Hugo Barra wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tagayo booskiisa Xiaomi si uu ugu laabto Silicon Valley ee Maraykanka
Tijaabada xawaaraha Samsung Galaxy S6 Edge Plus VS Cubot Cheetah 2
Maanta waxaan kuu keenaynaa tijaabo xawaare ah oo udhaxeysa Samsung Galaxy S6 Edge Plus VS Cubot Cheetah 2. Ayaa ku guuleysan doona dagaalka David ama Goliath?
Qiimaha Google Pixel XL wuxuu gaarayaa $ 1.500 doolarka Amazon
Google Pixel waxaa laga iibsan karaa Amazon qiime dhan $ 1.500 maxaa yeelay Google awood uma lahan inay had iyo jeer kayd ku leedahay dukaankeeda internetka.
Huawei P10 ayaa markale lagu sifeeyay shaashadda qalooca
Bixiyaha cusub ayaa na hor dhigaya Huawei P10, markab isnignia ah oo raaci doona ka dib Huawei Mate 9 oo leh shaashadda qalooca
Ulefone Gemini ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Sugitaan dheer ka dib, Ulefone Gemini ayaa ugu dambeyntii la soo bandhigay. Taleefan u taagan nidaamkiisa kamarad laba-geesood ah iyo tayada dhammaatay
Ghostek wuxuu muujinayaa naqshadda LG G6 oo leh mid ka mid ah daboolkeeda
Ghostek, oo ah soo saaraha kiisaska moobiilka, ayaa ku daabacay boggeeda internetka sii deynta LG G6, oo muujineysa qeyb ka mid ah nashqadda.
TAG Heuer ayaa bilaabi doonta smartwatch cusub bisha May ee sanadkan
TAG Heuer wuxuu ku biirayaa soosaarayaasha ay ka go'an tahay Android Wear 2.0 waxayna bilaabi doonaan xirmo cusub oo xiran oo xiran May.
Bixby, kaaliyaha Samsung Galaxy S8, wuxuu sameyn karaa baaritaanno muuqaal ah
Mid ka mid ah wejiyadaha kaaliyaha casriga ah ee Samsung Galaxy S8 Bixby ayaa noqon doona awoodda lagu sameeyo baaritaanno muuqaal ah.
Nokia 6 waxaa lagu iibiyay kaliya 1 daqiiqo
Nokia 6 ayaa maanta laga daahfuray dalka Shiinaha iyadoo loo marayo iibinta tooska loo isticmaalo oo halbeegyada oo dhan lagu iibiyey hal daqiiqo.
Sawirka muraayadda hore ee qaboojiyaha ee loo malaynayo Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus ayaa la sifeeyey
Sawir cusub ayaa ku dhowaad xaqiijinaya Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus in uusan yeelan doonin badhanka guriga oo muuqaal ah iyo dhaldhalaal aad u dhuuban korka / hoose
Sony G3221 wuxuu sii maraa AnTuTu oo leh kamaradaha 23MP iyo 16MP
Sony G3221 waxay umuuqataa inuu yahay kii badali lahaa 5 Sony Xperia M2015 sidaa darteed waxay umuuqataa inuu ka yimid sifooyinka lagu bixiyay shaashadda AnTuTu
Sawirada dhaxalka Sony Xperia XA ayaa soo baxay
Sony Xperia XA waxay lahaan doontaa qof dhaxla si dhaqso leh taasna waxaa lagu muujiyaa sawiro taxane ah oo maanta la kashifay
Shirkadda caanka ah ee Nokia P1 waxay ku salaysnaan kartaa qaabeynta Sharp Aquos Xx3
Sharp, Foxxcon iyo Nokia ayaa si wada jir ah ugu wada muuqda warkan si ay u muujiyaan astaan ​​noqon karta mid ka mid ah waxyaalaha sanadka soo if baxaya.
Samsung Display waxay muujineysaa xoogaa ka mid ah Galaxy S8 saddex fiidiyow
Samsung Display waxay u adeegsan laheyd bandhigyada Galaxy S8 seddex fiidiyow oo muujinaya faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda AMOLED.
Saacadaha cusub ee Google ayaa la bilaabi doonaa 9ka Febraayo waxaana soo saaray LG
LG Watch Sport iyo LG Watch Style waxay noqon doonaan Google's smartwatches cusub ee casriga ah ee casriga ah ee la bilaabi doono bisha Febraayo 9 oo ay weheliso Android Wear 2.0.
ZTE wuxuu ku dhawaaqayaa qeexitaanada Hawkeye, taleefankiisa casriga ah ee crowdfundind
Hawkeye waa taleefan dad badan ku saleysan oo ay abuureen shirkadda ZTE, laakiin waxaa caawimaad ka helaya bulshada Android.
Samsung Galaxy S8 ayaa la soo bandhigi lahaa 29-ka Maarso waxaana la soo saari lahaa dhammaadka Abriil $ 849
Waxaan horeyba u haysanay taariikh cusub oo lagu soo bandhigayo Samsung Galaxy S8, si sax ah Maarso 29 ayaa noqon doonta midda lagu muujiyo.
Samsung waxay joojisay howlgelinta Android Nougat ee Galaxy S7 iyo S7 edge
Dhibaatooyinka qaar awgood, Samsung waxay xilligan joojisay soo saarista cusbooneysiinta Android Nougat ee Samsung Galaxy S7 iyo S7 edge.
Dib u eegida kumbuyuutarka laaban karo ee Bluetooth Teknolojiyada, kumbuyuutar aad ku qaadato meel kasta
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib-u-eegista kumbuyuutarka isku laaban ee teknoolojiyada Bluetooth, oo aad u dhaqaale badan in kastoo taasi micnaheedu ahayn inay tayo wanaagsan tahay.
Samsung Galaxy J7 (2017) qeexitaannada ayaa xaday
Samsung waxay leedahay hanti kale oo weyn oo leh taxanaha J ee taleefanka oo hadda lagu cusbooneysiin doono Galaxy J7 cusub laga bilaabo 2017 si loogu beddelo kii hore.
LG Android Wear smartwatch aan la garanayn ayaa maraya FCC
Android Wear 2.0 ayaa la soo bandhigi doonaa bilowga bisha Febraayo, sidaa darteed waxaa horeyba u jiray dhowr shirkadood, sida LG, oo wajahaya.
Gudoomiyaha Samsung wuxuu wajahay suurta galnimada in lagu xiro South Korea
Waxay umuuqataa in dhamaan dhibaatooyinka Samsung aysan dhamaan hadana waxaa madaxweynaheeda la xiri karaa maalmaha soosocda.
Android Nougat wuxuu bilaabi doonaa inuu ku soo baxo HTC 10 saddexda toddobaad ee soo socda
Android Nougat waxay bixineysaa dhibaatooyin ka badan intii la filayay waana HTC 10 oo ugu dambeyn heli doonta 3da toddobaad ee soo socota.
LG G6 waxay isticmaali doontaa tikniyoolajiyad cusub si ay uga hortagto in terminalku uu kululaado
LG G6 wuxuu la socon doonaa teknolojiyad cusub oo ka kooban tuubooyin yaryar oo kala bixiya kuleylka si looga hortago kuleylka.
ZTE si ay u bilawdo Android Wear smartwatch oo leh LTE sanadka oo dhan
ZTE waxay horey u qorsheysay inay soosaarto Android Wear smartwatch oo ay la socoto LTE dabayaaqada sanadkaan. Waxay noqon laheyd markii kuugu horeysay ee aad xirto Android.
HTC waxay soo saari doontaa terminaal kayar sanadkan 2017
Qorshayaasha HTC ee sanadka 2017 ayaa ah inay bartilmaameedsadaan kalabar taleefannada casriga ah ee ay soo saartay sanadkii hore si ay ugu yimaadaan xaaladooda ugu wanaagsan.
Sawiradaasi waxay daaha ka qaadi lahaayeen sumcadda shirkadda Nokia ee sannadka 2017, Nokia 8.
Nokia 8 waxay umuuqataa inay tahay taleefoonada Nokia ee sanadkan 2017 waxayna kamid noqon doontaa 6-da terminal ee gaari doona suuqa.
HTC U Ultra iyo U Play waa rasmi oo leh naqshado gaar ah iyo qeexitaano kala duwan
HTC ayaa hadda shaaca ka qaaday HTC U Ultra iyo HTC U Play, laba taleefan oo leh tilmaamo kala duwan iyo xitaa shaashad labaad oo ah tan koowaad.
Sony wuxuu adeegsan lahaa alwaaxda OLED shaashadda Xperia ee 2018
Ugu dambeyntiina, Sony ayaa ka beddelka LCD-da u wareejin doonta albaabbada OLED ee sannadka 2018 aaladeeda sare ee Xperia.
Dhowr jawaab celin kiis ayaa yimid oo muujinaya Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 waxaa lagu arki karaa kiisaska dhowr soo-saare oo rajeynaya soo bandhigida si ay u eegaan terminaalka.
Samsung waxay soo saari doontaa taleefan casri ah oo laabma rubaca saddexaad ee sanadka
Taxanaha Westworld wuxuu noo sheegi karaa inaan ku jirno mustaqbalka dhow annagoo og in Samsung ay soo saari doonto taleefan casri ah oo isku laaban.
Shirkadda Huawei ayaa mar sii horreysay iibisa wax ka badan shirkadda Samsung ee dalka Spain
In yar, bishii Nofeembar ee sanadkii hore, shirkadda Huawei waxay dhaaftay Samsung waddanka Spain. Xaqiiqda dhabta ah ee muujinaysa markii qofna u dhowaan karin Samsung.
Nokia 6 waxaa loo suuq geyn karaa si caalami ah
Nokia 6 ayaa la shaaciyey dhammaadkii usbuucii hore, in kasta oo ay gaar tahay in uu imaan doono Shiinaha. Maanta waxaan ognahay inay tani isbadali karto.
In kabadan 96% dhamaan Galaxy Note 7s ayaa dib loogu celiyay Samsung
Maanta waxaan ka ognahay Samsung in ka badan boqolkiiba 96 Galaxy Note 7 in lagu celiyay shirkadda Kuuriya. All news weyn.
Faahfaahinta iyo sawirrada Xiaomi Mi6 waa la sifeeyey
Mashiinka 'Xiaomi Mi6' wuxuu ku arki karay iftiinka MWC waana sababtaas awgeed in ay soo ifbaxayaan waxyaabo badan oo la mid ah tan maanta aan gacanta ku hayno.
HTC Ocean Note waxay u adeegsan doontaa kamarad la mid ah Google Pixel oo leh qalabayn dheeri ah
Xaqiiqadani waxay ka dhigan tahay in suurtagalnimada in HTC Ocean Note loo gudbin karo tayada sawirka cajiibka ah ee Google Pixel.
Joogitaanka Netatmo, kani waa kamaradda banaanka Netatmo
Waxaan falanqeyneynaa kamaradda Netatmo Presence, aalad u taagan istaandarka ogaanshaha jiritaanka iyo nidaamka ogeysiinta oo dhameystiran
LG wuxuu bilaabayaa LG G6 bil kahor Samsung Galaxy S8
LG waxay bil la leedahay LG G6 si ay u muujiso inay leedahay terminaal weyn oo Android ah oo lagu cabbiri karo waji ka waji Galaxy S8.
Galaxy J3 waxay heshaa shahaadada Wi-Fi ee leh Android 7.0 Nougat
Samsung's Galaxy J3 wuxuu horey uhelay shahaadada Wi-Fi, markan wuxuu kusocdaa Android 7.0 Nougat, taas oo muujineysa inay heli doonto casriyayntaan goor dhaw.
Xiaomi Mi 6 waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashad qafiif ah iyo 6GB RAM ah
Labada nooc ee 'Xiaomi Mi 6' ayaa u soo bandhigaya isticmaalaha ikhtiyaar flatter ah iyo qaab aad u qaloocan; dambe oo leh 6GB RAM.
Sawirada dhabta ah ee Moto G5 Plus ayaa muuqda
Moto G5 Plus ah oo la iibinayo ayaa ka soo muuqday suuqa internetka ee Romania. Waxaan haynaa sawirro ina tusaya nooca hore.
Falanqaynta Isbaanishka ee dhagaha dhagaha ee Syllable D900 Mini, sameecado madax banaan oo madax banaan oo leh naqshad gaar ah
Bixby waa kaaliyaha dalwaddii Samsung iyo 'Pay Mini' waa nooca hoos loo dhigay ee heerka lacag bixinta internetka. Labaduba waxay ka muuqdaan bogga Samsung.
Calaamadaha cusub ee Huawei, P10 iyo P10 Plus, ayaa imaan doona bisha Maarso ama Abriil sidii ku dhacday P9 iyo P9 Plus.
Sawirrada Samsung Galaxy C7 Pro ee soo socda ayaa qarsoon
Waxaan horeyba u haysannay sawirro dhab ah oo ku saabsan Samsung Galaxy C7 Pro oo soo socda si loo cusbooneysiiyo qalabka hore ee Galaxy C7 ee la bilaabay Maajo 2016.
HTC U sidoo kale wuxuu diirada saari lahaa qaabeynta sida ku cad muuqaalka muuqaalka
HTC way cadahay in sanadkaan ay dooneyso inay diirada saarto qaabeynta la siin karo boosteejooyinka ay bilaabeyso.
Samsung waxay sanadkan diirada saareysaa iibinta 60 milyan oo Galaxy S8 ah
Sannadkan Samsung waxay dooneysaa inay wax walba la gasho Galaxy S8, maadaama ay qorsheyneyso inay iibiso ilaa 60 milyan oo unug sida aan maanta ognahay.
Nokia 6 waa mobiladii ugu horreeyay ee Android ah ee sumaddan ah oo ay soo saarto shirkadda HMD Global oo si gaar ah uga shaqeysa Shiinaha. 6 ayaa imaan doonta sanadka oo dhan.
ZTE Axon 7 wuxuu noqonayaa midka ugu wanaagsan dhamaadka-qiimaha xagga lacagta, taas oo ay ugu wacan tahay qiimaheeda dhexdhexaadka ah iyo tayada layaabka leh
Falanqaynta fiidiyowga ee Meizu M3 Note, oo ah soosaaraha cusub ee soo saaraha ee u taagan tayada dhammaystirka, shaashadda iyo qiimaha la hagaajiyay
Samsung waxay ka dhigeysaa smartwatches-keeda la jaan qaada "cadowga"
Shirkadda Koonfurta Kuuriya ee Samsung ayaa ka dhigaysa taleefannada casriga ah ee la jaan qaada iPhone iyo iPad adoo bilaabaya barnaamijyada macruufka ah ee IOS
LG Tone Infinim, waxaan tijaabinay sameecadaha xiisaha leh ee LG
Falanqaynta fiidiyowga ee LG Tone Infinim sameecadaha dhegaha, qalab aad u raaxo badan oo anfac leh oo lala yaabo tayada codkiisa.
Cusboonaysiinta ku socota Android 7.1.1 ayaa hadda loo heli karaa Nexus 6
Nexus 6 hadda waa loo cusbooneysiin karaa Android 7.1.1 Nougat iyada oo loo marayo OTA ama sawirka warshadda ee ay daabacday Google.
Ulefone Gemini, kuwani waa astaamaheeda farsamo
Ulefone ayaa hadda xaqiijisay astaamaha farsamo ee Ulefone Gemini, taleefan aad u dhameystiran oo u taagan jirkiisa aluminium
ZTE wuxuu ku dhawaaqayaa Blade V8 Pro ugu dambayntiina wuxuu ugu magac daray moobilkiisa tiro badan
ZTE wuxuu bilaabi doonaa bisha Sebtembar mobilo loogu talagalay gebi ahaanba dad badan iyo fikradaha bulshada Android. Blade V8 Pro ayaa lagu dhawaaqay.
ASUS waxay ku dhawaaqeysaa ZenFone 3 Zoom iyo ZenFone AR oo leh Google Tango
ASUS waxay soo bandhigtay laba terminaal oo leh laba ujeedo oo kaladuwan: ZenFone 3 Zoom iyo ZenFone AR oo leh Project Tango xaqiiqda la kordhiyay.
LG G6 aan qaab-dhismeedka ahayn ayaa macnaheedu yahay inay ka jaban tahay soo-saaristeeda
LG G6 wuxuu ku lahaan karaa faa iido weyn adoo u soo diraya qaybta aan qaab dhismeedka ahayn, maxaa yeelay tani waxay ka dhigeysaa mid ka raqiisan soosaarka.
Aristotle waa sharad Mattel ee Google Home ee carruurta yaryar ee guriga
Aristotle waa sharad Mattel uu ku raacayo cunugaaga marxaladiisa koritaankiisa, maadaama uu caawiye caawiye u yahay in la dhigo qolkiisa.
Kani waa Casio smartwatch cusub oo xambaarsan Android Wear 2.0 wuxuuna bilaaban doonaa Abriil
Casio's smartwatch-ka cusub waa WSD-F20 oo wata Android Wear 2.0 iyo GPS-ka la dhisay. Saacad u adkeysanaysa dhammaan noocyada bey'adeed.
Swarovski kii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Android Wear smartwatch' oo la soo bandhigo bisha Maarso
Swaroski waxay la kaashan doontaa Qualcomm si ay u bilawdo Android Wear smartwatch bisha Maarso. Dhammaan wararka loogu talagalay dharka xiran.
Sony Xperia X 'Concept' waxay heshaa Android 7.1.1 Nougat
Dhamaan wararka weyn ee milkiilayaasha Xperia X kuwaas oo awoodi doona inay ku boodaan boodhadhka Android 7.1.1 Nougat oo leh cusbooneysiinta 'Concept'.
Kuwani waa qiimaha Samsung Galaxy A3, A5 iyo A7 (2017)
Shalay ayaa la shaaciyey saddexda taleefan ee casriga ah ee ka kooban taxanaha Galaxy A ee 2017. Hadda waxaan ogaanay qiimaha Galaxy A3, A5 iyo A7.
Samsung Galaxy S8 wuxuu heli lahaa khibrad nooca 'Continuum' ah
Samsung Galaxy S8 wuxuu la imaan karaa waxyaabo badan oo layaableh haddii lagu bilaabo Khibrad Desktop ah, waayo aragnimada 'Sii-wadashada' ee soo saaraha Kuuriya.
Samsung ayaa ku dhawaaqday taxane cusub oo Galaxy A ah oo leh biyo diidmo
Samsung waxay sanadka ku bilawdaa sida ugu wanaagsan uguna wanaagsan sedex taleefan oo kuwa dhexe ah: taxanaha Galaxy A. Warqad aad u xiiso badan.,
On Janaayo 7, OnePlus wuxuu furi doonaa dukaankiisii ​​ugu horreeyay ee 'khibrad' gudaha Hindiya ah
Waxay noqon doontaa dukaan 'waayo-aragnimo' ah, kii ugu horreeyay ee OnePlus gudaha Hindiya. Bakhaar jireed oo aad ka iibsan karto qaar ka mid ah boosteejooyinkiisa.
Sawir ka mid ah Sony Xperia X (2017) ayaa la sifeeyey
'Biqil la'aanta' waxay dooneysaa inay caan ku ahaato waana taxanaha 'Xperia X' ee raacaya isbedelka lagu bixiyay sawir kale oo la sifeeyey.
HTC Ocean Note waxaa loogu yeeri karaa U Ultra
U Ultra, ama loo yaqaan Ocean Note, waa mid ka mid ah saddexda taleefan ee shirkadda HTC soo bandhigi doonto 12-ka bisha Janaayo ee soo gelaya booska Note 7.
OnePlus 3 iyo 3T waxay helayaan cusbooneysiinta rasmiga ah ee Nougat
Iyadoo loo marayo OTA, cusbooneysiinta Nougat ee OnePlus 3 iyo OnePlus 3T waa inay imanayaan maalmahan ka dib markii lagu dhawaaqay.
Google ayaa soo bandhigi doonta 2 smartwatches oo wata Android Wear 2.0 sanadka soo socda
Bilowga sanadka 2017 waxaan arki doonaa laba smartwatches cusub oo Google ah, inkasta oo ay soo saareen sumad la aqoonsan yahay oo astaan ​​u gaar ah dul saari doonta.